Wasiirka Ganacsiga Iyo Wershadaha Puntland oo Xariga ka jaray Supermarketka Cusub ee DAAWAD [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiirka Ganacsiga Iyo Wershadaha Puntland oo Xariga ka jaray Supermarketka Cusub ee DAAWAD [Sawirro]
Supermarketka Cusub ee DAAWAD ee laga furay Garowe
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Dawladda Puntland Maxamuud Xassan Soocade ayaa caawa si rasmi ah xariga uga jaray Supermarket cusub oo lagu magacaabo Daawad Mall, kaas oo laga hirgeliyey magaalo madaxda Puntland ee Garoowe.
Xafladda xarig jarka ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Dawladda Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji, Xildhibaano, Agaasimaha maamulka madaxtooyada Puntland kana mid ah aasaasayaasha Supermarket cusub ee Daawad Cabdimahdi Abshir Cismaan, Agaasimaha habmaamuuska Madaxtooyada Cabdisalaan Xassan Ducaale iyo masuuliyiin kale.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Dawladda Puntland Maxamuud Xassan Soocade ayaa markii uu xariga ka jaray xarunta cusub waxaa uu sheegay in wax lagu farxo ay tahay in maalinba maalinta ka dambaysay gudaha Puntland ay ku soo badanayaan xarumaha ganacsi oo casri ah.
Ganacsatada reer Puntland ayuu Wasiirku uga mahadceliyey sida ay ugu howlan yihiin hirgelinta xarumo ganacsi oo casri ah, waxaana taas keentay amniga iyo kala dambeynta xiligaan kajirta Puntland.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji ayaa isna dhankiisa si aad ah u soo dhaweeyey xaruntaan ganacsi ee lagu magacaabo Daawad Mall.
Agaasimaha maamulka madaxtooyada Puntland kana mid ah aasaasayaasha Supermarket cusub ee Daawad Mall Cabdimahdi Abshir Cismaan ayaa sheegay in furitaanka xaruntaan ay ku timid dadaal badan oo ay u galeen sidii ay shacabkooda ugu soo kordhin lahaayen xarumo casri ah oo ay ka dukaamaystaan.
Agaasimaha habmaamuuska Madaxtooyada Cabdisalaan Xassan Ducaale ayaa bogaadiyay masuuliyiinta xaruntaan waxaana uu sheegey inay wanaagsan tahay inta wax laysku darsado in xarun noocaana ah la helo, si shacabka reer Puntland iyo Soomaali oo idil uga faa’iideystaan.
Supermarket-ka cusub ee Daawad Mall waxa ay tusaale u tahay in dhulka ay dadku leeyihiin islamarkaana maalgashi ay ka samaysan karaan, waana xarun ganacsi oo ay dhammaan u dhan yihiin adeegyadeedu.
Tan iyo markii uu hogaanka la wareegay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa soo badanayey ganacsatada reer Puntland ee dhulkooda inta ay dib ugu soo laabtaan hadana maalgashi ka samaysanaya .